ပီကေက သင့်ပါးစပ်ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းစေတာလဲ – Gentleman Magazine
ပီကကေ သငျ့ပါးစပျကို ဘယျလို သနျ့ရှငျးစတောလဲ
ဘက်တီးရီးယားတွေ ပျောက်ပျက်ဖို့ သင့်ပါးစပ်ကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ နယ်သာလန်က စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာ ပီကေဝါးတာဟာ သင့်ပါးစပ်ကို သန့်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
လေ့လာချက်မှာ ပါဝင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီကို သကြားမပါတဲ့ ပီကေ ၁၀ မိနစ်လောက် ဝါးခိုင်းပါတယ်။ ဝါးပြီးတဲ့ ပီကေဖတ်တွေကို လေ့လာကြည့်ရာမှာ ပီကေဖတ်တစ်ခုခြင်းစီမှာ ဘက်တီးရီးယား သန်း ၁၀၀ လောက် ကပ်ငြိပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီပမာဏဟာ ပါးစပ်ထဲမှာ ရှိသမျှ ဘက်တီးရီးယား အားလုံးနဲ့ စာကြည့်ရင် နည်းနည်းလေးဆိုပေမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ သွားပေါက်နည်းတာ၊ သွားဖုံး ပို ကျန်းမာလာတာ၊ ခံတွင်းနံ့ပိုကောင်းတာတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။
ပီကေဝါးလိုက်တာနဲ့ သင့်သွားမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ အစာ အပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ ချိုးတွေကို ရှင်းထုတ်ပေးလို့ပါလို့ စမ်းသပ်သူက ပြောပါတယ်။ အဲဒီ စမ်းသပ်ချက်ကို ပီကေကုမ္ပဏီ Wrigley က မတည်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပီကေဝါးခြင်းမှာ အခြား ဘာအကျိုးတွေ ရှိနေပါသေးသလဲ??
ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လေ့လာချက်တွေ အများကြီးရှိပြီး သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ပီကေဝါးတာဟာ သင့်ပါးစပ်ထဲက ဘက်တီးရီးယား အရေအတွက် လျော့ချဖို့ အရမ်း အကျိုးသက်ရောက်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒါဟာ ပီကေဝါးခြင်းက တံတွေးပိုထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်လို့လဲ ပါပါတယ်။ တံတွေးဟာ ဗက်တီးရီးယား သေစေနိုင်ပြီး သင့်သွားဖုံးသားကိုလဲ ပိုပြီး ကျန်းမာစေပါတယ်။
သွားပွတ်ကြိုးသုံးခြင်းဟာ သွားကြားထဲမှာရှိတဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေကို ရှင်းပစ်နိုင်လို့ အကောင်းဆုံး ဘက်တီးရီးယား သတ်နည်း ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ ပီကေကတော့ သွား မျက်နှာပြင်တွေကိုပဲ ရှင်းနိုင်တာပါ။
အဲဒါကြောင့် ပီကေတစ်ခုကို သွားပွတ်ကြိုးအစားထိုးလို့ မမြင်ပါနဲ့။ ပိုကောင်းအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် စဉ်းစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် ယာယီသုံး၊ အရေးပေါ်သုံး သုံးရတဲ့ အရာတစ်ခုလို စဉ်းစားပါ။
ဘယ်လိုပီကေက အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာတော့ သင့်အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ သကြားမပါဖို့တော့ သတိထားပါ။
သင့်ပါးစပ်ထဲက ဘက်တီးရယားဟာ ပုံမှန် ပီကေတွေမှာပါတဲ့ သကြားကို အချဉ်ဖောက်ပြီး အက်ဆစ် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သကြားမပါတဲ့ ပီကေတွေရဲ့ အချိုဓာတ်ကတော့ အဲဒီလို မဖြစ်စေပါဘူး။
ဘယ်လောက် ဝါးသင့်လဲဆိုတာကတော့ ၁၀ မိနစ်ပါပဲ။ အဲဒီထက် ကျော်သွားရင် ပီကေထံမှာ ကပ်နေမယ့် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပါးစပ်ထဲ ပြန်လွတ်နိုင်လို့ပါ။ အရသာလဲ ပျောက်သွားလောက်ပါပြီ။
ဘကျတီးရီးယားတှေ ပြောကျပကျြဖို့ သငျ့ပါးစပျကို လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ နယျသာလနျက စမျးသပျခကျြတဈခုမှာ ပီကဝေါးတာဟာ သငျ့ပါးစပျကို သနျ့စကွေောငျး တှရှေိ့ရပါတယျ။
လလေ့ာခကျြမှာ ပါဝငျသူ တဈဦးတဈယောကျစီကို သကွားမပါတဲ့ ပီကေ ၁၀ မိနဈလောကျ ဝါးခိုငျးပါတယျ။ ဝါးပွီးတဲ့ ပီကဖေတျတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရာမှာ ပီကဖေတျတဈခုခွငျးစီမှာ ဘကျတီးရီးယား သနျး ၁၀၀ လောကျ ကပျငွိပါလာတာ တှရေ့ပါတယျ။
အဲဒီပမာဏဟာ ပါးစပျထဲမှာ ရှိသမြှ ဘကျတီးရီးယား အားလုံးနဲ့ စာကွညျ့ရငျ နညျးနညျးလေးဆိုပမေယျ့ အကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရှိပါတယျ။ သှားပေါကျနညျးတာ၊ သှားဖုံး ပို ကနျြးမာလာတာ၊ ခံတှငျးနံ့ပိုကောငျးတာတို့ ဖွဈစပေါတယျ။
ပီကဝေါးလိုကျတာနဲ့ သငျ့သှားမှာ ကပျငွိနတေဲ့ အစာ အပိုငျးအစလေးတှနေဲ့ ခြိုးတှကေို ရှငျးထုတျပေးလို့ပါလို့ စမျးသပျသူက ပွောပါတယျ။ အဲဒီ စမျးသပျခကျြကို ပီကကေုမ်ပဏီ Wrigley က မတညျထားတာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပီကဝေါးခွငျးမှာ အခွား ဘာအကြိုးတှေ ရှိနပေါသေးသလဲ??
ဒီခေါငျးစဉျအောကျမှာ လလေ့ာခကျြတှေ အမြားကွီးရှိပွီး သခြောတာ တဈခုကတော့ ပီကဝေါးတာဟာ သငျ့ပါးစပျထဲက ဘကျတီးရီးယား အရအေတှကျ လြော့ခဖြို့ အရမျး အကြိုးသကျရောကျတယျ ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒါဟာ ပီကဝေါးခွငျးက တံတှေးပိုထှကျအောငျ လှုံ့ဆျောပေးနိုငျလို့လဲ ပါပါတယျ။ တံတှေးဟာ ဗကျတီးရီးယား သစေနေိုငျပွီး သငျ့သှားဖုံးသားကိုလဲ ပိုပွီး ကနျြးမာစပေါတယျ။
သှားပှတျကွိုးသုံးခွငျးဟာ သှားကွားထဲမှာရှိတဲ့ ဗကျတီးရီးယားတှကေို ရှငျးပဈနိုငျလို့ အကောငျးဆုံး ဘကျတီးရီးယား သတျနညျး ဖွဈနဆေဲပါပဲ။ ပီကကေတော့ သှား မကျြနှာပွငျတှကေိုပဲ ရှငျးနိုငျတာပါ။
အဲဒါကွောငျ့ ပီကတေဈခုကို သှားပှတျကွိုးအစားထိုးလို့ မမွငျပါနဲ့။ ပိုကောငျးအောငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျတဲ့ အရာတဈခုအဖွဈ စဉျးစားပါ။ ဒါမှမဟုတျ ယာယီသုံး၊ အရေးပျေါသုံး သုံးရတဲ့ အရာတဈခုလို စဉျးစားပါ။
ဘယျလိုပီကကေ အကောငျးဆုံးလဲ ဆိုတာတော့ သငျ့အပျေါပဲ မူတညျပါတယျ။ သကွားမပါဖို့တော့ သတိထားပါ။
သငျ့ပါးစပျထဲက ဘကျတီးရယားဟာ ပုံမှနျ ပီကတှေမှောပါတဲ့ သကွားကို အခဉျြဖောကျပွီး အကျဆဈ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သကွားမပါတဲ့ ပီကတှေရေဲ့ အခြိုဓာတျကတော့ အဲဒီလို မဖွဈစပေါဘူး။
ဘယျလောကျ ဝါးသငျ့လဲဆိုတာကတော့ ၁၀ မိနဈပါပဲ။ အဲဒီထကျ ကြျောသှားရငျ ပီကထေံမှာ ကပျနမေယျ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ပါးစပျထဲ ပွနျလှတျနိုငျလို့ပါ။ အရသာလဲ ပြောကျသှားလောကျပါပွီ။
Previous: ရေဘဲတွေဆီက သင်ယူနိုင်သည့် အောင်မြင်ရေးသင်ခန်းစာများ
Next: သင်က အိပ်ရာထဲမှာ ညံ့ကြောင်း သင် မသိသေးတဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ ခု